Umsebenzi wezobupolitika Umongameli we-US uBarack Obama
Umsebenzi wezopolitiko kaBarack Obama
UBarack Hussein Obama II waphumelela isikolo esiphakamileyo kunye neentlonelo ngo-1979 kwaye wayengumongameli we-Harvard Law Review ngaphambi kokuba anqume ukungena kwezopolitiko. Xa wagqiba ekubeni ufuna ukugijima kwi-Senate yase-Illinois ngo-1996, waqinisekisa ukugqweswa kwakhe ngokuphumelela ngempumelelo kwiziphakamiso zokutyunjwa kwabadlali bakhe abane. Oku kuye kwaphawula ukungena kwakhe kwezopolitiko zombuso.
Umlinganiselo weeNkonzo zezobupolitika zikaBarack Obama
Ngo-1988: U-Obama ungumhlobo wehlobo e-Chicago firm firm uSidley & Austin.
Ngo-1992: U-Obama uphumelela kwiHarvard kwaye ubuyela e-Chicago.
Ngo-1995: NgoJulayi, u-Obama - eneminyaka engama-34 ubudala - ushicilela imemori yakhe yokuqala, "Amaphupha Avela kuYise: Ibali leRace and Heritage." Ngo-Agasti, u-Obama uyifake iifayili zokusebenzela i-Seat Palm yase Illinois.
Ngowe-1996: NgoJanuwari, u-Obama unezikhalazo zakhe zokuncintisana ezine. uyaphuma njengomviwa kuphela. NgoNovemba, ukhethwa kwi-Senate yase-Illinois, elawulwa yiRephablikhi.
Ngo-1999: U-Obama uqala ukusebenza kwiCongress.
U-2000: U-Obama ulahlekelwa ngumngeni wakhe kwinqanaba lebandla elibanjelwe nguRobby Rush.
Ngo-2002: NgoNovemba, iidemokhrasi zenza ulawulo lweRephabliki kwi-Illinois Senate.
2003-2004: U-Obama uphakamisa irekhodi lakhe lomthetho kwaye ukhonza njengosihlalo weKomiti yezeMpilo neNtlalo.
2003: U-Obama uqala ukusebenza kwi-Senate yase-US; I-candidate ehamba phambili yeDemokhrasi ihoxisa ngo-2004 ngenxa yecala lokwabelana ngesondo. UDavid Axelrod [uqala ukuba neekhamera zevidiyo] malunga nantoni yonke into eyenziwa ngu-Obama kwindawo kawonkewonke. Usebenzisa le mifanekiso ukudala ividiyo emizuzu emihlanu ye-intanethi yeJan. 16, 2007, isimemezelo sokuba u-Obama usebenza kumongameli.
Ngo-2004: Ngomhla ka-Matshi, u-Obama uzuza iiprayimari kunye nama-52% evoti. NgoJuni, umphikisi wakhe weRiphabhlikhi uJack Ryan uhoxiswa ngenxa yecala lokwabelana ngesondo. Ukhulula idilesi yeDemocratic National Convention ngoJulayi 2004, kwaye ngoNovemba ukonyulwa kwiSenate yase-US nge 70% yevoti.
2005: U-Obama ufake iifayili ze-PAC, iThe Hope Fund, ngoJanuwari. Kungekudala emva kokunyulwa kwakhe kwi-Senate yaseUnited States, wanikela idilesi ephikisayo ephikisana nokholo kufuneka ibe nendima enkulu kwinkulumo kawonkewonke.
2006: U-Obama ubhala aze ashicilele incwadi yakhe, "Ukuphicothwa kwethemba." Ngo-Oktobha, uvakalisa ukuba uqwalasela i-run of presidency yase-United States.
Ngo-2007: NgoFebruwari, u-Obama umemezela ukuba ngumongameli waseMelika.
Ngo-2008: NgoJuni, uya kuba ngumtyunjwa we-Democratic Party. NgoNovemba, unqobe umtyunjwa weRiphabliki uJohn McCain ukuba abe ngumongameli wokuqala wase-Afrika waseMerika kunye noMongameli we-44 welizwe.
2009: U-Obama uvulwa ngoJanuwari. Kwiintsuku zakhe zokuqala eziyi-100 e-ofisi, uyandisa i-inshurensi yezempilo ngoncedo lwabantwana kwaye unikeze ukhuseleko lomthetho kubasetyhini abafuna ukuhlawula okufanayo. Ufumana iCongress ukuba idlulise i-bill ye-$ 787 yezigidi zezigidi zokukhuthaza ukukhula koqoqosho, kwaye igawula irhafu kwiintsapho zokusebenza, amashishini amancinci kunye nabathengi basekhaya bokuqala. Ukhulula ukuvinjelwa kwe-embryonic cell cell research kunye nokuphucula ubudlelwane neYurophu, eChina, eCuba naseVenezuela. UMongameli unikezelwa umvuzo weNobel woNyaka ka-2009 kwiimvavanyo zakhe.
Ngo-2010: U-Obama unikela intetho yakhe yokuqala yeNtetho yeNyunyana ngoJanuwari. Ngo-Matshi, ubonakalisa isicwangciso sakhe sokuphucula impilo, esibizwa ngokuba nguMthetho onoxinakekelwa ngumNyango, kumthetho. Abachasene nesenzo bathi baphula uMthetho-siseko we-US.
Ngo-2011: U-Obama ubonakalisa uMthetho woLawulo loHlahlo lwabiwo-mali ukubuyisela kwiinkcitho zikaRhulumente. Ubonisa kwakhona ukutshitshiswa komgaqo-mkhosi owaziwa ngokuba yi-Do not Ask, Do not Tell, nto leyo evimbela amabutho angama-gay evulekile ekusebenzeni kwii-Armed Forces zase-US. "NgoMeyi, ukukhanya okuluhlaza kubonakala ku-Pakistan. wekhokheli lase-al-Qaeda u-Osama bin Laden ngeqela le-US Navy SEALs.
Ngo-2012: U-Obama waqalisa ukusebenza kwekota yakhe yesibini, kwaye ngoNovemba, unqoba ngamavoti angaphezu kwezigidi ezi-5 ngaphezu kweRepublican counterpart.
Ngo-2013: U-Obama ufumana ukunqoba kwezomthetho ngesivumelwano se-bipartisan malunga nokwanda kweerhafu nokuchithwa kwemali, eyona nyathelo ukugcina isithembiso sakhe sokhetho lokunciphisa ukulahleka komthetho ngokunyusa irhafu kwizinto ezibutyebi. NgoJuni, ukufunyanwa kwakhe kwetanki ngenxa yokubanjelwa kweziganeko eBanghazi, eLibya; ngenxa yezigxeko zokuthi i-IRS ijolise imibutho yezopolitiko ekhuselekileyo efuna isimo sokuhlawulwa kwentela; kwaye ngenxa yeembonakaliso malunga nenkqubo yokuhlola i-Arhente yeSizwe yeNtshona Koloni. Ulawulo luka-Obama lunzima neengxaki ezininzi zasekhaya nakwamanye amazwe.
2014: U-Obama uyalela izigwebo kwiRashiya ngenxa yokuxhaswa kweCrimea. UJohn Boehner uyammangalela umongameli, ecinga ukuba uye wagqithisa igunya lakhe elilawulayo malunga neengxenye ze-Care Affordable Care Act. AmaRiphabhuliki afumana ukulawulwa kwe-Senate, kwaye ngoku u-Obama kufuneka alwe nenyaniso yokuba iiRiphablikhi zilawula zombini izindlu zeCongress ngexesha lokugqibela iminyaka emibili yekota yakhe yesibini.
2015: Kwidilesi yakhe yesibini yeNyunyana yeNyunyana, uthi iUnited States ayikho kwimpumelelo. Ngaphandle kwamaDemokhrasi, uyasongela ukusebenzisa amandla akhe okulawula ukukhupha nayiphi na ingeniso yeRiphabliki engenayo kwi-ajenda yakhe. U-Obama unezintloko ezimbini zokuphumelela kweNkundla ephakamileyo kulo nyaka: Imali yenkxaso-mali enokuxhaswa kwemali yonyango iyaxhaswa, kwaye ukulingana komtshato kuyinyaniso. Kwakhona, u-Obama kunye namagunya ehlabathi amahlanu afikelela kwisivumelwano samandla enyukliya kunye ne-Iran. Kwaye u-Obama uvula iSicwangciso saMandla esiCocekileyo sokunciphisa i-greenhouse green and exissions.
Ngo-2016: Ngonyaka wakhe wokugqibela e-ofisi, u-Obama uxhathisa ukulawula umpu kodwa udibana neenkcaso ezinamandla kumabini omabini. Ukhulula idilesi yakhe yokugqibela ye-Union kwi-Januwari 12, 2016. Ngo-Matshi, uba ngumongameli wokuqala wase-US ukususela ku-1928 ukuya ku-Cuba.
Ngo-2017: U-Obama uhambisa idilesi yakhe yokuphumla ngoJanuwari e-Chicago. Ngosuku lwakhe lokugqibela eofisini ngoJanuwari 19 - uxela ukuba uya kugqithisa izivakalisi ezingama-330 ezingekho mthethweni. Kwimihla yokugqibela, u-Obama wanikela i-Vice-President uJoe Biden kunye noMongameli woMongameli weNkululeko kunye nokuHlukana.
Ukuphucula ukufikelela kwefowuni kumawebhusayithi akwaRhulumente
Ukucoceka Ukukhupha Imithetho ye-Bodybuilder yeNdalo
Ngaba umhla wePasika uhambelana nePasika?
Ukusinda nokuPhuma kwiRide Century Ride